Poleta poleta plastika vita amin'ny plastika China Manufacturer
Dongguan Yalan Packing Materials Co., Ltd. [Guangdong,China] Business Type:Manufacturer Main Mark: Africa , Americas , Asia , Caribbean , East Europe , Europe , Middle East , North Europe , Oceania , Other Markets , West Europe , Worldwide mpanondrana:21% - 30% Certs:ISO9001 Description:Famonosana poleta,Poly strapping Band,Horonana vita amin'ny plastika
Home > Products > Strapping > Famandrihana PP > Poleta poleta plastika vita amin&#39;ny plastika
Ny tranokalanay dia manana traikefa mihoatra ny 20 taona amin'ny fivarotana sarimihetsika Stretch, Transparent Tape sy PP Strapping, famokarana tariby poly strapping, ny vokatrao dia manana kalitao azo antoka, afaka araka ny takian'ny mpanjifa mampisy fahasamihafana ny sakany, ny halavany, ny hateviny ary ny fisintonana plastika strapping roll. Afaka nanao fanontana fitifirana ihany koa. Amin'ny fiainantsika andavanandro, ny fonjan'ny fonosana fonosana dia lasa safidy malaza indrindra amin'ny fampiharana fibre vita amin'ny olona.
Azonao atao ny mametaka fonosana pava efa vita (High Tensile Virgin Pp Strapping).
● Mitahiry vola 50%: Ny PP dia azo ampiasaina ho solon'ny fehikibo vy fehintsoratra iray na ny tariby-vy miaraka amin'ny tanjaka fihenjanana mitovy .Ny lanja kosa dia 1/6 amin'ireo fitaovana am-paosy, izay mahatahiry 50% ny vidin'ny fonosana.
Famonosana poleta Poly strapping Band Horonana vita amin'ny plastika Famonosana palety Famonosana plastika Famonosana boaty 1 Famolahana poleta Famonosana tanana